ZAVA VERONIQUE : « Aoka izay ny tsindry hazo lena atao amin’ny vahoakan’Analanjirofo »
Véronique Zava, vehivavy mpandraharaha ara-toekarena avy ao Fenoarivo-Atsinanana­. 5 février 2019
Amin’izao fitondrana vaovao tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izao, dia manana ny ambarany ny tenany. Izy izay sarotiny amin’ny Faritra niaviany ary mahita ifotony ny fiainan’ny mponina. Nandritra ny fanehoan-kevitra nentiny tamin’ny mpanao gazety dia notsipihiny fa mila olona madio tanana, mila olona vonona hiady amin’ny tsy rariny sy manana fahasahiana hitondra ny hetahetam-bahoaka ny ao Analanjirofo.
Faritra manan-karena ara-javaboary iny Faritra iny. Ahitana lavanila, jirofo, letisia, harena maro isan-karazany… ka tokony ho faritra lasa lavitra eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana. Tsy izany anefa no zava-misy. Tsy mipaka any amin’ny vahoaka izany fananana otrika harena izany. Vao mainka nitotongana ny fiainan’ny mponina. Nirongatra ny halatra lavanila, niharatsy ireo vidim-bokatra. Manjaka ny tsindry hazo lena mahazo ny madinika : fakana an-keriny tanim-bahoaka, tsy fisian’asa. Amin’ny maha zanaky ny distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana­ azy, nandritra izao fihaonana tamin’ny mpanao gazety izao, dia nahitsy izy nilaza fa na dia renivohitry ny Faritra Analanjirofo aza i Fenoarivo-Atsinanana­ dia mbola tara amin’ny fampandrosoana raha mitaha amin’ireo distrika hafa. Manana ny herijika rehetra ahafahana tonga amin’izany fampandrosoana izany anefa i Fenoarivo-Atsinanana, hoy hatrany ny fanamarihany. Ireo tamberim-bidy sy hetra isan-karazany izay efain’ny mpandraharaha sy ny vahoaka dia manampy amin’ny ampahany betsaka ny filana amin’ny hanatsarana ny lalana ifamezivezena sy famoaham-bokatra.
Manao antso avo amin’ny vahoaka
Tara-masoandro ho an’ny Faritra Analanjirofo izao fijoroan’ny fitondrana vaovao tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina izao. Manana vina sy politikam-pampandrosoan­a nandraindrain’ny vahoakan’Analanjirof­o ny Filoham-pirenena ary mifanaraka amin’ny vinan’ity vehivavy mpandraharaha ity izany.
Raha tena voara-maso tsara ireo tamberim-bidy sy ireo hetra isan-karazany izay aloan’ny mpandraharaha sy ny vahoaka dia tokony manampy betsaka amin’ny filana fanatsarana ny lalana ifamezivezena sy amin’ny famoaham-bokatra. Manoloana ireo olana rehetra ireo dia manao antso avo amin’ny vahoaka ao amin’ny distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana i Véronique Zava mba hiray hina ho amin’ny fampandrosoana maharitra ny tany niaviana. Fotoana izao iadivana amin’ny tsy rariny sy ny tsindry hazo lena mahazo ny mponina ao Fenoarivo-Atsinanana sy Analanjirofo, hoy izy.